विदेशबाट फर्केर श्रीमानले श्रीमतीसंग हिसाब माग्दा…..! – Taja Khawar
छोरी सरहकी यि सुन्दरीसँग प्रेममा रहेछन् नायक भुवन केसी
भाइले गरे दिदीको ह,त्या, छि,निएको टाउकोसँग आमा–छोराले खिचाए सेल्फी!
विदेशबाट फर्केर श्रीमानले श्रीमतीसंग हिसाब माग्दा…..!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ समय: १३:५५:४४
श्रीमान्को ज्या,न लिएको आ’रो,प,मा सिरहा प्रहरीले एक महिलालाई प, क्रा ,उ गरेको छ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ निपनिया कु’टी’टोल निवासी ३९ वर्षीय दुखरन महराको ज्या’xन लि’एको आ’xरो’,प,मा उहाँकी ३८ वर्षीया श्रीमती हरिहरदेवी महरालाई सोमबार प,क्रा,उ गरेको हो । दुखरनको गत भदौ १८ गते भारतको बिहार जयनगरस्थित बरही गाउँमा श,x व फेला परेको थियो ।
भारतीय प्रहरीले दुखरनको श, व फेला परेपछि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाएको र अनुसन्धानका क्रममा उहाँकी श्रीमती हरिहरदेवीको सं’लग्न’ता पाइएपछि प, क्रा ,उ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । घ ट नामा सं’लग्न भारतीय २६ वर्षीय मुकेश यादवलाई भारतीय प्रहरीले प, क्रा, उ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
श्रीमान् दुखरनले गर्ने अ’वैध प्रे’ ‘म स’म्ब’न्धका कारण श्रीमती हरिहरदेवीकै योजनामा दुखरनको ज्या’xन लि’एको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीको भनाइ छ । महरा द’म्पतीको चार छोराछोरी छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महराले आफ्नै घरमा फर्निचर तथा किराना पसल सञ्चालन गरेका थिए ।
श्रीमान्ले आफूलाई विदेशमा हुँदा कमाएको पैसा कहाँ खर्च गरिस् भन्दै कु’xट’xपि’xट गर्ने गरेकाले आफ्ना प्रेमी भारतीय नागरिक मुकेशसँग मिलेर हरिहरदेवीले श्रीमान् दुखरनको यस्तो यो’जना बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले बताउनुभयो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रीमानलाई स’x फा’x या गर्ने सोच त बनाइन तर कसरी ? यसका लागि उनी एम्बुलेन्स चालक रहेका मुकेशको साथ लिने सोच बनाइन्। र, उनीसँग योजना साझा गरिन। मुकेश र हरिहरदेवीबीच दु’ई वर्षअघि देखि स’म्ब’न्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जयनगरमा पा’xठेघ’रको अ’प्रेस’न गराउन श्रीमानसँगै भारतीय बजार जयनगर जाँदा मुकेशसँग उनको भेंट भएको थियो। उपचारको क्रममा अस्पताल बस्दा मुकेशसँग उनी नजीक भएकि थिइन।
श्रीमानको सx फाx याका लागि प्रस्ताव गर्दा मुकेशले हरिहरदेवीसँग एक लाख भारतीय रुपैयाँ माग गरे। हरिहरदेवीले यती रकम दिन नसक्ने भन्दै ५० हजारमा काम गरिदिन आग्रह गरिन। ६० हजारमा कुरा मिल्यो। यो रकम जुटाउन उनले श्रीमानसँगकै सल्लाहमा भदौ १७ गते गो’लबजा’रस्थित छिमेक लघुवित्तबाट ६० हजार ऋण निकालिन्। ऋण निकालिसकेपछि हरिहरदेवीले विरामी भएको ना’टक गरेर उपचारका लागि भारतीय बजार जयनगर जानुपर्ने भन्दै श्रीमानलाई फकाइन्। उनी श्रीमानसँगै जयनगर पुगीन्।
सीमावर्ती बजार माडर पुगेर उनले मुकेशलाई फोन गरेर आफू श्रीमानसँगै जयनगर आइरहेको जानकारी दिइन्। यो सबै घटनाका लागि क’बोल गरेको रकम श्रीमानसँगै रहेको समेत उनले मुकेशलाई बताइदिइन्। जयनगर रेल्बे स्टेशनमा चिया पिउने क्रममा मुकेशसहित तीन जना आइपुगे। मुकेशले दुखरनलाइ खाजा खान जाउ भन्दै बाइकमा चढाएर लगे। उत्तै ज्या’xन लिएर नहरमा फा’xलिx’दि’xए।
त्यसपछि घर फर्केर हरिहरदेवीले श्रीमानको भारतमै कुनै समुहले ज्या’xन लि’xएx’र श’xव समेत बे’पता बनाएको गाउँलेलाई बताएकि थिइन्। प्रहरीले घटनाको शुक्ष्म अनुसन्धान गर्दै जाँदा तथ्य झस्काउने खालको बाहिर आएको छ, एसपी पाण्डेले बताए।
Last Updated on: September 21st, 2021 at 1:55 pm
१४३ पटक हेरिएको